Hanqinni jiru qaama karoora guddaati. Innis ijoollee Oromoo tajaajiltuu taatee akka haftu fagoott kan ittisu. Kan nama qabate irra qajeeltuu eeguun dordhummaa dha. Bulcha Oromiyaa sobaa kan waantaphee foon uffatan tahan irra tarkaanfii akka fudhattu eeguun karoora abbaa waantaphee guddicha akka hin jirrett ilaaluu taha. “Waantaphee keessa anjaa hedduu jira. Gonka hin nokkorani. Waa’ee oginaa hin arganii. Lubbuu dhuunfaa hin qabani...dambooboo nama mararanii fi xifa nameenyaa hin qabne”, kan jalqaba,jedhe TPLF osoo hin tahin Oscar Wildeeti.